Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo – FJKM Ambavahadimitafo Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo |
Alahady 22 mey 2022, andinihina ny lohahevitra hoe « Manavao ny Fanahy masina« , ka nitondran’ny tarika Ny mpitory toriteny an-kira araka ny Galatiana 5 : 16 – 25 « 16Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo. 17Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanaroeo manao izay zavatra tianareo. 18Fa raha tarihin’ny Fanahy ianareo, dia tsy mba ambanin’ny lalàna. 19Fa miharihary ny asan’ny nofo, dia izao: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, 20fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adi-lahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, 21fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra. 22Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, 23fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany. 24Fa izay an’Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filany tamin’ny hazo fijaliana. 25Raha velon’ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy. 26Aoka isika tsy handrani-tena foana ka hifampihaika sy hifampialona. »
Andeha isika hiombona amin’izany fotoana masina izany :